शालिकराम आत्महत्या प्रकरणमा रवि लामिछाने निर्दोष ठहर
काठमाडौं । पत्रकार शालिकराम पुडासैनी आत्महत्या प्रकरणमा जिल्ला अदालत चितवनले आरोपी तीनै जनालाई सफाइ दिएको छ । आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दाका आरोपी रवि लामिछाने, युवराज कँडेल र रुकु भनिने अस्मिता कार्कीलाई सफाइ दिएको हो ।
अदालतका स्रेस्तेदार रुद्रमणि गिरीका अनुसार न्यायाधीश हेमन्त रावलको इजलासले आज आइतबार उक्त फैसला गरेको हो । मागदावी नपुगेकाले तीनै जनाले सफाइ पाएको गिरीले राससलाई जानकारी दिनुभयो । फैसलामा भनिएको छ, “उल्लेखित अवस्थाका आधार प्रमाण र सन्दर्भका तथ्ययुक्त वस्तुस्थितिबाट मृतक पुडासैनीले आफू मर्नुभन्दा पहिले व्यक्त गरेको भनाइलाई प्रतिवादीको कार्य व्यवहार आचरण अभिव्यक्तिले सन्निकट सम्बन्ध जनाउने प्रमाण भेटिएन ।”
फैसलाअघि आज पक्ष र विपक्षका तर्फबाट बहस भएको थियो । आज आरोपी तीनै जना अदालतमा उपस्थित भएका थिए । गत साउन २२ गते नारायणगढ बसपार्कमा रहेको कङ्गारु होटलमा पुडासैनी झुण्डिएको अवस्थामा मृत भेटिएका थिए । आत्महत्या गर्नुपूर्व पुडासैनीले मोबाइलमा रेकर्ड गराएको भिडियोमा रवि लामिछानेले आफूलाई आत्महत्या गर्न बाध्य बनाएको आरोप लगाएका थिए ।
भदौ ९ गते न्यायाधीश रावल कै इजलासले लामिछाने र कँडेललाई धरौटीमा र कार्कीलाई सादा तारेखमा रिहा गरेको थियो । लामिछानेलाई रु पाँच लाख र कँडेललाई तीन लाख धरौटीमा रिहा गरिएको थियो । जिल्लाको आदेशपछि लामिछाने उच्च अदालत पुग्नुभएको थियो । उच्चले पनि पुडासैनीको आत्महत्या बारेमा जिल्लाकै आदेश सदर गरेको थियो ।
सफाइ पाए पछि लामिछानेले के भने ? सुन्नुहोस्
राजतन्त्रको भन्दा गणतन्त्रमा सिपाहीलाई बढि मर्का !
मंसिर १, २०७६ आइतबार दैनिक अनलाइन
कात्तिक २८, २०७६ बिहिबार दैनिक अनलाइन
कस कसलाई डुबायो यौन काण्डले ? (नेताकाे सूचीसहित)
भरतपुर महानगरकी मेयर रेणु दाहालमाथि अपाच्य गालीगलौज
भोलिदेखि नेपाल-भारत सीमा नाका बन्द हुने
आलमको पक्षमा बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापालाई हटाउन सर्वोच्चमा निवेदन